Yintoni Umsebenzi Wokwenyama?
Kwi-physics, umsebenzi wezandla ichazwa njengombutho osetyenzisiweyo ophindaphindiweyo licandelo lokufuduka eli kwicala elinye namandla. Ke ukuba ucofa ifriji eyi-2.0 m ukuya emgangathweni, kwaye kufuneka ufake i-900 N, wenze lo msebenzi ungaka:
(900) (2.0) = 1,800
1,800 yintoni? Umsebenzi kwinkqubo ye-MKS ulinganiswa ngee-joules, J, yiyo loo nto ili-1,800 J. Uyakuhlala ubona umsebenzi ochazwe kwiijoules kwiingxaki ze-physics. Icandelo le-CGS lomsebenzi yi (erdly named) erg, kodwa kunqabile ukuba uyibone isetyenzisiwe. (Icandelo le-FPS lomsebenzi yiponti yeenyawo.)
isiraphu yokukhwehlela ye-cherry tussin
Ke ukusebenzisa amandla ka-1.0 N kumgama we-1.0 m kuthetha ukuba wenze i-joule enye yomsebenzi. 1.0 J = 1.0 x 107I-ergs kuba ii-ergs ziisentimitha ezi-dyne, kwaye kukho i-105Iidynes ngeNewton kunye ne-10Mbiniiisentimitha kwimitha.
Kodwa umsebenzi awuphelelanga kumandla apheleleyo asetyenzisiweyo uphindaphindwe ngumgama ohanjiweyo; Into ekuphela kwayo kumandla abalulekileyo yile isetyenzisiweyo kwicala lokuhamba. Umzekelo, jonga ubunzima obutsaliwe kulo mzobo ulandelayo.
Amandla asetyenzisiweyo kwicala lokuhamba yeyona nto ibalulekileyo, ke ufuna icandelo F Ethe tye (ucinga ukuba urhuqa ubunzima kwaye awukhethi!). Eli candelo lithe tye F cos theta, ke umsebenzi owenzayo, NGAPHAKATHI , Ingaba yi:
Apha, F ngamandla asetyenziswayo, s kukufuduka, kwaye i-theta yikona phakathi kwabo.
Cinga ukuba utsala ubunzima emfanekisweni ngokusebenzisa i-200. N kunye ne-angle theta ngama-40.0 degrees. Mngakanani umsebenzi owenzayo wokurhuqa ubunzima obungaphezu kwe-50.0 m?
Impendulo echanekileyo ngu-7, 660 J.
Sebenzisa le nxaki
Utsala isifuba sedrawer, usebenzisa amandla angama-60.0 N kwi-angle ye-60.0 degrees. Wenza kangakanani umsebenzi wokutsala ngaphezulu kwe-10.0 m?
Utsala isilingi ngentambo kwiidigri ezingama-30, usebenzisa amandla angama-20 N. Wenza umsebenzi ongakanani ngaphezulu kwe-1.0 km?
3. Utyhala ibhokisi yezitya ngapha komgangatho wekhitshi, usebenzisa i-100.0 J ukuyihambisa nge-10.0 m. Ukuba usebenzisa amandla kwi-60.0 degrees, yintoni amandla owasebenzisileyo?
Utyhala imoto engaphandle kwerhasi apha endleleni, usebenzisa amandla ayi-800.0 N. Mngakanani umsebenzi owenzileyo wokuhambisa imoto nge-10.0 m?
Ezi zilandelayo ziimpendulo zemibuzo yokuziqhelanisa:
mnyama mnyama ulusu ngokujikeleza umlomo
1.7 x 104UJ
ipilisi emhlophe embhoxo emhlophe
I-percocet 5 325 yeziphumo ebezingalindelekanga
yintoni uhlobo lwesibeleko
I-gabapentin isebenza njani kwiintlungu zentliziyo
uvavanyo lweziyobisi oluncinci
Iidilesi zeimeyile zeunited States